Chelsea Oo 10 Ciyaartoy Oo Derby County Ah Gurigeeda Ku Soo Garaacday, Iyadoo U Soo Baxday Afar Dhamaadka Capital One Cupka | Radio Baidoa
Guriga Sports Chelsea Oo 10 Ciyaartoy Oo Derby County Ah Gurigeeda Ku Soo Garaacday,...
Chelsea Oo 10 Ciyaartoy Oo Derby County Ah Gurigeeda Ku Soo Garaacday, Iyadoo U Soo Baxday Afar Dhamaadka Capital One Cupka
Kooxda Chelsea ayaa Derby County gurigeeda guul kaga soo gaadhay, guushaas oo ay ku soo gaadhay 3:1, waxaan Chelsea goolasha u kala dhaliyay Hazard, Flipe Luis iyo Schürrle. Chelsea ayaana u soo baxday afar dhamaadka koobka Capital One Cupka.
Chelsea ayaa marti u ahayd kooxda Derby County, waxayna Chelsea doonaysay inay kooxda ka soo talaabsado isla markaanay u soo baxdo afar dhamaadka koobka Capital One Cupka. Mourinho ayaana shax xoogan ku soo galay kulankan taas oo muujinaysa sida aanu u dhayalsanayn kooxda County oo kooxdiisu marti u ahayd.
Ciyaarta ayaana ku bilaabtay qaab iksu dheeli tiran waxayna kooxda Derby County u muuqatay inay halis ku noqon karto kooxda Blues, laakiin Chelsea ayaa daqiiqadii 23 aad heshay fursadeeda ay kula timid goolka furitaanka, waxaana qalad uu sameeyay difaaca Richard Keogh ee County ku ciqaabay Edin Hazard kaas oo kubbad uu ka helay Cesc Fabregas kooxdiisa ugu dhaliyay goolka furitaanka.
Cesc Fabregas ayay caawinta uu goolka u sameeyay Hazard ahayd caawintiisii 15 aad wuxuuna 10 gool caawineed ka sareeyaa ciyaartoyga Chelsea ku soo xiga oo ah Oscar kaas oo 5 gool caawiye ka ahaa tartamada oo dhan.dhamaadkii qaybtii hore ee ciyaarta ayuu dhaawac halis ah soo gaadhay da’yarka Chelsea ee Zouma kaas oo sariirta bukaanka garoonka lagaga dhex qaaday. qaybtii hore ee ciyaarta ayaana ku soo dhamaatay 1:0 ay Chelsea gacanta sare ku lahayd.Qaybtii danbe ee ciyaarta ayay Chelsea ciyaarta maamulka u sii haysay waxayna daqiiqadii 56 aad gool laaga xorta ah ku yimid oo aad u qurux badan kooxdiisa Chelsea udhaliyay Flipe Luis, goolkaas ayaana ahaa goolkii ugu horeeyayee uu Luis kooxdiisa Blues u dhaliyay. Ciyaarta ayaana noqotay 2:0 ay Chelsea hogaanka ku dheeraysatay.
Didier Drogba ayaa isagana ciyaarta oo maraysa daqiiqadii 63 aad dhaawac looga saaray iyada oo lagu soo badalay Remy.Daqiiqadii 71 aad ayay Derby County ciyaarta dib ugu soo laabatay waxaana goolka furitaanka u dhaliyay xidigeeda Craig Bryson ,wuxuuna ciyaarta ka dhigay 2:1 ay wali Chelsea hogaanka ciyaarta ugu hayso. intaa wixii ka danbaysayna ciyaarta ayaa sii shidan tahay waxayna County ku dadaalaysay inay la timaado goolka barbaraha.
Laakiin daqiiqadii 78 aad ayuu markale xaalku ku sii xumaaday kooxda Derby County kadib markii kaadha cas loo taagay Jake Buxton kaas oo isaga oo ah difaaca ugu danbeeya qabsaday Remy oo ku jira xerada ganaaxa County, sidaana waxaa lagu siiyay kaadhka cas oo toos ah.intaa wixii ka danbaysayna waxay kooxda martida loo ahaa ku ciyaaraysay 10 ciyaartoy oo kaliya.
Chelsea oo ka faa’iidaysanaysa ciyaartoyga laga saaray Derby County ayaa afar daqiiqado kadib la timid goolka kalsoonida waxaana markana shabaqa soo taabtay Andre Schürrle, ciyaarta ayaana noqotay 3:1 ay markale Chelsea hogaanka ciyaarta ku dheeraysatay.
Ugu danbayn ciyaarta ayaa ku soo idlaatay 3:1 ay Chelsea guusha ku gaadhay isla markaana ay iskaga xaadirisay afar dhamaadka koobka Capital One Cupka. waxaana Chelsea kula soo biirtay afar dhaamdka Capital One Cupka kooxda Sheffield United oo ka soo talaabsaday Southampton waxaana bari la ciyaari doonaa laba kulan oo kale iyadoo la eegi doono kulanka Liverpool ay u safri doonto kooxda Bournemouth.